ktmkhabar.com - सविताको हत्या हो की आत्महत्या ? यस्तो छ प्रहरीको भनाई
सविताको हत्या हो की आत्महत्या ? यस्तो छ प्रहरीको भनाई
काठमाडौं – चितवनकी २८ वर्षीया सविता भण्डारीको मृत्यु अस्वभाविक भएको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरुले चर्को विरोध गरिरहेका छन् । पारिवारिक कारणले तनावमा रहेकी सविताले आफै आत्महत्या गरिन की परिवारले हत्या गरेर हुण्ड्यायो ? यो विषयको अनुसन्धान भइरहेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले आत्महत्या दुरुशाहन गरेको भन्दै सविताका श्रीमान, ससुरा र आमाजुलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । माइती पक्षले प्रहरीमा दिएको किटानी जाहेरी अनुसार उनीहरुलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको हो ।
जिल्ला अदालत चितवनका श्रेस्तेदार इश्वर अर्यालका अनुसार थुनछेक बहसपछि श्रीमान र ससुरालाई १–१ लाख र आमाजुलाई २५ हजार धरौटीमा छोडिएको हो ।
सात वर्षअघि वैशाख ३ गते सविताको चितवनका योगेन्द्रकुमार धितालसँग मागी विहे भएको थियो । घरमा श्रीमान, ससुरा, सासु र एक पाँच वर्षीय छोरा छन् । परिवारले दाइजो नल्याएको निहुँमा बारम्बार मानसिक र सारिरीक यातना दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
परिवारको व्यवहारका कारण विछित्भ भएकी सविता केही दिन अघि आफ्नै घरमा भुण्डिएको अवस्थामा भेटिएकी थिइन् । परिवार र छरछिमेकीले उनलाई चितवन मेडिकल कलेजमा पुर्‍याएका थिए । अस्पताल लैजाँदासम्म उनी जीवित रहेको भएपछि डाक्टरले बचाउन सकेनन् ।
माइती पक्षका अनुसार लामो समयदेखि सविता पारिवारिक कारणले तनावमा थिइन् । विवाहमा दाइजो नल्याएको निहुमा उनलाई प्रताडित गर्ने गरिएको बहिनी सजनीको आरोप छ । परिवारले उनलाई जबरजस्ती मानसिक तनावको औषधि खुवाउने गरेको पनि उनले बताएकी छन् । तर, श्रीमान योगेन्द्रले भने आफ्नी श्रीमती साँच्चै मानसिक समस्याको शिकार बनेको र चिकित्सकको परामर्शमा औषधि सेवन गराएको दावी गर्छन् ।
सजनीले सार्वजनिक गरेको एउटा अडियो सुन्दा सविता अत्यन्तै विक्षिप्त अवस्थामा पुगेको प्रतीत हुन्छ । उनले रुँदै बहिनीसँग भनेकी छन्, ‘म एकदमै कमजोर भइसकेँ । अब म सक्दिनँ कान्छी । मसँग बोल्ने आँट पनि छैन । म एकदम निराश भइसकेँ । धेरै बलियो हुन खोजेँ तर, भित्रबाट नै कमजार भइसकेँ । म दिनदिनै यो पीडा सहन सक्दिनँ ।’
घटनापछि मृतकका माइती पक्षले यसलाई सहजरुपमा लिन सकेनन् । सविताको हत्या गरिएको वा मानसिक–यातना दिएर आत्महत्याका लागि वाध्य पारिएको उनीहरुले आशंका गरेका छन् । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले आत्महत्या ठहर्‍याएको थियो । सविताले आफ्नै कोठामा पासो लगाएर झुण्डिएको प्रहरीले जनाएको छ । मृतकको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा मृत्यूको कारण झुण्डिएको भनिएको छ ।
‘यो आत्महत्या दुरुत्साहनको घटना हो भन्ने प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष हो । हामीले आफ्नो तर्फबाट सबै प्रमाणसहितको प्रतिवेदन अदालतमा बुझाइसकेका छौं । अन्तिम निर्णय अदालतबाटै हुने हो । हामी आफ्नो तर्फबाट अदालतलाई सबै सहयोग गर्छौं ।’ डिएसपी थापाले भने ।